२२ वर्षकी युवती जसले आफ्नै ‘खुट्टाको फोटो’ बेचेर महिनाको १२ लाख कमाउँछिन ! « TopStar Khabar
२२ वर्षकी युवती जसले आफ्नै ‘खुट्टाको फोटो’ बेचेर महिनाको १२ लाख कमाउँछिन !
एजेन्सी : अमेरिकाकी २२ वर्षकी युवती डिजायर गेटो एक समय रियलस्टेट व्यवसाय गरेर सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन्। यससँगै उनले साइड बिजनेसको रुपमा मोडलिङ गर्न थालिन् । यस क्रममा उनले मानिसहरुले उनको खुट्टा निकै मन पराउने थाहा पाइन् । उनका खुट्टाको तस्वीरको लागि मानिसहरु ठूलो रकम खर्च गर्न तयार रहेको थाहा पाउँदा उनलाई अचम्म लाग्यो ।
अहिले उनले अनलाइनमा आफ्ना खुट्टाको फोटो बेचेर ८ हजार पाउण्ड (साढे १२ लाख नेपाली रुपैयाँ) कमाउने खुलासा गरेकी छिन् । बेलायती अखबार मिररमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार डिजायर इन्स्टाग्राममा निकै लोकप्रिय छिन्। इन्स्टाग्राममा उनका १.१ मिलियन फलोअर छन् । पछिल्लो समय भने डिजायर ओन्लीफ्यान्समा सक्रिय छिन् र यही अनलाइन प्लेटफर्मबाट उनले महिनामा झण्डै साढे १० हजार डलर कमाउँछिन् ।
यसको लागि उनले धेरै केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो खुट्टाको फोटो खिचेर पठाए पुग्छ। डिजायरले मिररसँग भनिन् ‘एक दिन एकजनाले मलाई म्यासेज गरेर मेरो खुट्टाको १० फोटोका लागि ३ सय डलर अफर गरे। यसका अलावा उनको अरु कुनै माग थिएन ।पहिले त मैले केही बुझ्नै सकिन पछि थाहा पाएँ कि मानिसहरुमा खुट्टाका विषयमा पनि अनौठो आकर्षण भएको थाहा पाएँ ।’
उनले अगाडि भनिन् ‘केही मासिनसहरुलाई खुट्टाको पेडिक्योर हेर्न मन पर्छ, केही मानिसहरुलाई पैतला हेर्ने सोख हुन्छ । केही मानिसहरु मेरो लागि स्टकिङ किनिदिन्छन् । केहीले मेरो खुट्टालाई स्टाइलिस मोजामा हेर्न रुचाउँछन् । खास कुरा यो हो कि यी मध्ये धेरैजसोलाई नग्नताको कुनै पर्वाह हुँदैन । खासमा उनीहरुलाई खुट्टाप्रति मात्रै लगाव हुन्छ ।’ डिजायरले आफ्ना खुट्टाको एक तस्वीरलाई सामान्यतया २५ डलरमा बेच्छिन् । उनका खुट्टाको तस्वीरका साथै भिडियो पनि चर्चामा रहन्छन् ।
डिजायरले खुट्टाको मसाज गर्दै गरेको भिडियो बनाउँछिन् । यसका अलावा हाइ हिल लगाएको र खोलेको पनि भिडियो बनाउँ छिन् । यी भिडियोहरु पनि निकै लोकप्रिय छन् । डिजायरका अनुसार उनले अहिलेसम्म पनि मानिसहरु उनका खुट्टा किन मन पराउँछन् भन्ने बुझ्न सकेकी छैनन् । डिजायरका पार्टनर ४२ वर्षका छन्। उनैले डिजायरका खुट्टाको तस्वीर खिच्छन्। उनले पनि डिजायरको खुट्टा किन मानिसहरुले मन पराउँछन् भन्ने बुझ्न सकिरहेका छैनन् । उनलाई यसमा कुनै गुनासो पनि छैन किनकि यसरी ठूलो कमाइ भइरहेको छ ।
बिश्वकी कान्छी अर्वपती काइली जेनरको सेल्फी स्टाईलमा बेबि बम्प शो बन्यो भाइरल । (फोटोफिचर)
चर्चित रियालिटी शो भ्वाइस अफ नेपालको कोच, कसले कति पारिश्रमिक पाउछन् ?
हार्दिक बधाई किरण गजमेर। ??
संगीतकार बाबुल गिरि को संगीत रहेको “एकलौटी बजारमा “सार्बजनिक भएकोछ !
यतिबेला “बीच्च बीच्चमा ४’ बिवाधमा आएपछि दुर्गेशले ल्याउने भए ‘बहिष्कार’